Semalt वर्णन गर्दछ किन वेबसाइट एनालिटिक्स तपाईंको व्यवसाय बृद्धिको लागि महत्त्वपूर्ण छ
सफल मार्केटिंगको एक प्रमुख सिद्धान्त भनेको तपाईंको ग्राहकलाई चिन्ने र उनीहरूको आवश्यकताको लागि अपील गर्ने हो। तपाइँको वेबसाइट आगन्तुकहरूले के खोज्दैछन् भन्ने कुराको ज्ञान र तिनीहरूलाई कसरी दिने भन्ने बारेको जागरूकताले कसरी व्यवसाय बनाउँदछ वा बिच्छेद गर्दछ। वेबसाइट एनालिटिक्स उपकरणहरू तपाईका आगन्तुकहरूलाई के टिक बनाउँदछ र कसरी उनीहरूको भ्रमणलाई बिक्रीमा रूपान्तरण गर्दछ भन्ने कुरा पत्ता लगाउँदा अमूल्य हुन सक्छ।
यो लेखमा, हामी वेब विश्लेषक के हो र यो तपाईंको व्यापार वृद्धिको लागि किन महत्त्वपूर्ण छ वर्णन गर्दछौं।
वेब एनालिटिक्स के हो?
वेब एनालिटिक्स अन्तर्दृष्टि प्राप्त गर्न र प्रयोगकर्ताको अनुभव र अनलाइन उपस्थिति बढाउन वेब-आधारित जानकारीको स .्ग्रह हो।
वेबसाइट एनालिटिक्स रिपोर्ट गर्दछ कि कसले तपाईंको साइट भ्रमण गर्दछ र कसरी आगन्तुकहरू एक पटक उनीहरू त्यहाँ आउँदछन्। राम्रो एनालिटिक्स उपकरणको साथ तपाईले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कि तपाईका आगन्तुकहरु कत्ति पुराना छन्, उनीहरुको लि ge्गहरु, उनीहरु बस्छन् र अरु धेरै। तपाइँ शाब्दिक बटनको क्लिकमा पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, कुन कुराले तपाइँको वेबसाइटमा उनीहरूलाई डोर्‍यायो, उनीहरूले त्यहाँ कति लामो समय बिताए र कुन पृष्ठहरू, इत्यादि। यस प्रकारको डाटा तपाइँको वेबसाइटलाई सकेसम्म सक्षम र सिर्जना गर्नमा महत्त्वपूर्ण छ। तपाईंको लक्षित बजारमा अपील गर्ने सामग्री। पालैपालो, तपाईं सुधार र परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ वेबसाइट विश्लेषण रिपोर्ट अनुसार; तपाईको व्यवसायलाई बढाउन यो ठूलो सहयोगी हुन सक्छ।
वेबसाइट एनालिटिक्स किन सहयोगी छ?
तपाईका आगन्तुकहरू चिन्नुहोस् र उनीहरूको प्रयोगकर्ता अनुभव सुधार गर्नुहोस्!
तपाईको ब्यापारको बारेमा निर्णय लिँदा तपाईको अवस्थित ग्राहकहरुको ख्याल गर्नु मात्र महत्वपूर्ण छ तर उनीहरूको प्रयोगकर्ता अनुभव सुधार गर्न जहाँ सम्भव छ। त्यस्ता निर्णयहरूले पनि, प्रायः जसो अवस्थामा नयाँ ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्दछ। यी सबै दिमागमा राख्दै, तपाइँको वेबसाइट आगन्तुकहरूलाई चिन्नु सही निर्णयहरू गर्न अत्यावश्यक छ।
यदि तपाइँसँग तपाइँको साइट मा आगन्तुकहरुको जनसांख्यिकीय को लागी एक विचार छ - उदाहरण को लागी उनीहरुको लि gender्ग, उमेर दायरा, उनीहरु बस्छन्, आफ्नो रुचि के हो, आदि - तपाइँ आफ्नो प्रयोगकर्ता अनुभव सुधार गर्न को लागी एक राम्रो स्थिति मा हुनेछ। त्यस्तै प्रकारले, यदि तपाइँले आफ्नो साइटहरूमा पहुँच गर्ने बेला कुन यन्त्रहरू, ब्राउजरहरू र अपरेटिंग प्रणालीहरूले प्रयोग गर्ने ट्र्याक गर्न सक्दछन् भने, तपाइँ आफ्नो वेबसाइटको उपयुक्तता जाँच्न र सुधार गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
एउटा साधारण उदाहरण यो हो कि यदि तपाइँ मोबाइल यन्त्रहरू प्रयोग गर्ने तपाइँको धेरै आगन्तुकहरूलाई ट्र्याक गर्नुहुन्छ, तपाइँ तपाइँको वेबसाइटलाई मोबाइलमैत्री बनाउन प्राथमिकतामा जान्नुपर्नेछ। त्यस्तै गरी, यदि तपाइँको एनालिटिक्स उपकरणहरूले तपाइँको आगन्तुकहरुको उमेर र लि track्ग ट्र्याक गर्दछ, तपाइँ वेबसाइट लाई अधिक उपयोगी र अपील गर्न अनुकूल बनाउन सक्नुहुन्छ।
तपाइँका आगन्तुकहरूलाई चिन्नु भनेको तपाइँको वेबसाइटलाई सहि बजारमा दर्साउने उत्तम तरिका हो। यस प्रकारको सुधारले व्यक्तिहरूलाई तपाईंको वेबसाइटमा लामो समयसम्म रहन प्रोत्साहित गर्दछ र फलस्वरूप, उच्च रूपान्तरण दरमा नेतृत्व गर्नेछ।
तपाईको सब भन्दा सफल सामग्री पत्ता लगाउनुहोस्
वेबसाइट एनालिटिक्स उपकरणहरूले तपाईंको उत्तम सामग्री हाइलाइट गर्दछ। तपाईं कुन सामग्रीले सबैभन्दा धेरै दृश्यहरू, सबैभन्दा लामो भेटघाटहरू, र कुन पृष्ठहरूले व्यक्तिहरू पछि भ्रमण गर्दछन् भन्ने कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ। अन्य तरिकाहरूमा, तपाई सजिलैसँग देख्न सक्नुहुन्छ कि कुन सामग्री सबैभन्दा सफल हो, तपाईंलाई यसलाई तपाईंको फाइदाको लागि प्रयोग गर्न अनुमति दिदै।
उदाहरण को लागी, एक पटक तपाईले सामग्रीको एक लोकप्रिय टुक्रा पहिचान गरेपछि तपाई खरीद लि links्कहरू थप्न सक्नुहुन्छ, एक्शन बटनमा कल गर्न सक्नुहुन्छ इत्यादि। पृष्ठमा वा सिधा आगन्तुकहरू बढि सजिलै साइन-अप पृष्ठमा। केवल तपाईको प्रयासहरूलाई कहाँ केन्द्रित गर्ने भनेर थाहा पाउँदा तपाइँको रूपान्तरण दर र तपाइँको समग्रमा ब्यापार बढाउन मद्दत पुर्‍याउँछ।
समान तरिकाले, तपाईं अग्रणी पृष्ठहरू पुन: कार्य र थप अप-टु-डेट जानकारी थप्न सक्नुहुन्छ वा यसको सम्पूर्ण हेराई नयाँ बनाउन सक्नुहुन्छ। थप रूपमा, तपाईं अन्य सामग्रीहरू मार्फत सफल सामग्री पुन: निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ र यसलाई सोशल मिडिया, वेबिनार स्क्रिप्ट, इत्यादिका लागि अनुकूल बनाउन सक्नुहुन्छ।
साथै, तपाईंको सामग्रीको लोकप्रियताको ट्र्याकिंगले हाइलाइट गर्दछ कुन टुक्राहरू यति राम्रोसँग काम गरिरहेको छैन। तपाईं कम लोकप्रिय सामग्री सुधार गर्न समय खर्च गर्न सक्नुहुनेछ, वा केवल नयाँ बनाउँदा अन्तर्दृष्टि प्रयोग गर्नुहोस् - अधिक सार्थक - सामग्री।
तपाईंको वेबसाइटको एसईओ बढावा
खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन (SEO) तपाईंको वेबसाइटको सफलताको लागि महत्त्वपूर्ण छ र त्यसैले तपाईंको व्यवसाय। ट्राफिकको अधिक तपाईंको वेबसाइटले आकर्षित गर्दछ, लेड र रूपान्तरणहरूको संख्या अधिक।
वेबसाइट एनालिटिक्सले तपाईको एसईओलाई धेरै तरीकाले बढावा दिन सक्छ। तपाइँको आगन्तुकको रुचि क्षेत्र र डेमोग्राफिक बारे सचेतताको साथ, तपाइँ लक्षित सामग्री उत्पादन गर्न र Google र अन्य खोज इञ्जिनहरूमा देखाउन सक्षम हुनुहुन्छ। साथै, ट्र्याकि refer रेफरलहरूले तपाईंलाई ब्याकलिंक्स अन्तर्दृष्टि दिन्छ।
यदि तपाईं गुगलसँग आफ्नो एनालिटिक्स उपकरण जोड्नुहुन्छ भने, तपाईं खोज वाक्यांश ट्र्याक गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंको वेबसाइटमा सब भन्दा ट्राफिक उत्पन्न गर्दछ। तपाईका सामग्री र मेटाडाटामा ती कुञ्जीशब्दहरू र वाक्यांशहरू प्रयोगमा ल्याइएको छ भनेर सुनिश्चित गर्न यो उपयोगी छ।
तपाईं अझ एक कदम अगाडि जान सक्नुहुन्छ र साइट खोजी ट्र्याकिंग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाइँलाई देखाउँदछ कि आगन्तुकहरू के खोज्दैछन् जब उनीहरू तपाइँको वेबसाइटमा आउँदछन्। यो एनालिटिक्स विकल्पले तपाईंलाई अवलोकन गर्न अनुमति दिँदछ कि तपाईंको अवस्थित सामग्री तपाईंको आगन्तुकहरूको इच्छासँग मेल खान्छ कि भनेर। तपाईं उनीहरूको अपेक्षाहरू पूरा गर्दै हुनुहुन्छ कि हुन्न भन्ने कुराले तपाईंलाई उत्तम सामग्रीको अनुभव प्रदान गर्न र आगन्तुकहरूलाई ग्राहकहरूमा बदल्नको लागि तपाईंको सामग्री समायोजन गर्न अनुमति दिनेछ। तपाईं नयाँ ब्लग पोष्टहरूका लागि पनि केही विचारहरू पोषण गर्न सक्नुहुनेछ।
पहिचान शीर्ष रेफरलहरू
वेबसाइट एनालिटिक्सले ट्र्याक गर्न सक्दछ जहाँ तपाईका धेरै जसो सन्दर्भहरू आएका थिए। एकचोटि तपाईंले आफ्नो शीर्ष रेफरलहरू पहिचान गर्नुभयो, तपाईं रणनीतिहरूमा काम गर्न सक्नुहुनेछ तिनीहरूलाई अझ बढाउनको लागि। साथै, तपाईंको कमजोर क्षेत्रहरू चिन्नेले तपाईंलाई तिनीहरूलाई सुधार गर्न र तपाईंको साइटमा अधिक ट्राफिक उत्पन्न गर्न अनुमति दिनेछ।
यदि, उदाहरण को लागी, तपाइँको वेबसाइट खोज इंजनहरु बाट यसको धेरै आगन्तुकहरु को लाभ, यो तपाइँलाई भन्छ कि तपाइँको SEO राम्रो काम गरीरहेको छ। यदि, अर्कोतर्फ, तपाईंको आगन्तुकहरू फेसबुक विज्ञापनबाट आउँदछन् र खोज इन्जिनबाट सायद सायद तपाईको फेसबुक पृष्ठलाई अधिक बनाउन सक्नुहुन्छ जबकि तपाईको एसईओ ब्रश गर्दा पनि खोज इञ्जिनको राम्रो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको आउटबाउन्ड लिंकहरू जान्नुहोस्
साथसाथै तपाइँको सन्दर्भ कहाँबाट आउँछ भनेर पहिचान गर्दै वेबसाइट एनालिटिक्सले तपाइँलाई कसलाई सन्दर्भ गर्दैछ बताउनेछ, अन्यथा आउटबाउन्ड लिंकहरू भनेर चिनिन्छ। एकचोटि तपाईंले तपाईंको मुख्य आउटबाउन्ड लिंकहरू सूचीबद्ध गर्नुभयो, तपाईं यो जानकारी ती वेबसाइटका मालिकहरूसँग सम्पर्कमा राख्न र कामको साझेदारीको सुझाव दिन सक्नुहुन्छ।
अन्य व्यवसायहरूसँगको सहकार्यले तपाईंलाई निश्चित रूपमा बढ्न मद्दत गर्दछ। क्रस-पदोन्नतिहरू र आपसी सिफारिशहरू साझेदारीमा तपाईंको दुबै व्यवसायलाई फाइदा पुर्‍याउने उत्तम तरिकाहरू हुन्। कुन व्यापारिक सहयोगहरू तपाइँको लागि सब भन्दा फलदायी हुनेछ भनेर जान्नु, र तिनीहरूको लागी ती महत्वपूर्ण सम्बन्धहरू बनाउनको लागि पहिलो चरण हो। तपाईं लक्षित व्यवसायमा पुग्न सक्नुहुनेछ र उनीहरूसँग तपाईंको एनालिटिक्स रिपोर्ट साझा गर्नुहोस्, तिनीहरूलाई तपाईंको प्रस्तावमा सहमत गर्न सक्ने सम्भावना बढी बनाउन।
ई-वाणिज्य मेट्रिक्स ट्र्याक गर्नुहोस्
तपाईंको व्यवसायले सेवाहरू, उत्पादनहरू, सफ्टवेयर वा केहि फरक चीजहरू सबै सँगै बेच्न सक्छ। तपाइँ जे बेच्नुहुन्छ, तपाइँको वेबसाइट बिक्री रिपोर्ट परिचित हुनको लागि महत्वपूर्ण रिपोर्ट हो। तपाईं महत्वपूर्ण अन्तरदृष्टि देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै रूपान्तरण दरहरू, शीर्ष रेफरलहरू, कुल राजस्व र प्रमुख उत्पादनहरू, आदि, सबै एक रिपोर्ट भित्र। जब तपाइँलाई थाहा हुन्छ, उदाहरणको लागि, तपाइँको अग्रणी उत्पादन के हो, तपाइँ तपाइँको प्रचारलाई अगाडि बढाउँदै विभिन्न च्यानलहरूमा केन्द्रित गर्न सक्नुहुन्छ। सन्दर्भ प्रक्रियाको साथ सम्पर्क राख्नु भविष्यको सहयोग योजनाको लागि पनि उपयोगी छ जुन अधिक बिक्रीको परिणाम दिन्छ। तपाईंको ई-कमर्स मेट्रिक्स ट्र्याक गर्नु सफल व्यापारको बढेको आवश्यक अंश हो।
कुन वेब एनालिटिक्स उपकरण मैले प्रयोग गर्नु पर्छ?
त्यहाँ धेरै वेबसाइट एनालिटिक्स उपकरणहरू उपलब्ध छन् र यो एक विश्वसनीय, सम्मानित कम्पनीबाट एक व्यापक उपकरण छनौट गर्न महत्त्वपूर्ण छ। Semalt वेब एनालिटिक्स तपाइँको व्यापार लाई बढाउन मद्दत गर्न विभिन्न अन्तरदृष्टि उपकरण प्रदान गर्दछ।
२०१ 2013 मा स्थापित, Semalt एक अत्याधुनिक पूर्ण स्ट्याक डिजिटल एजेन्सी हो। उनीहरू उन्नत एनालिटिक्स सेवाहरूको लागि वेब उपकरणहरू प्रदान गर्दछ साथ साथै एसईओ र अन्य वेब सेवाहरूको दायरा। Semalt का सयौं संतुष्ट ग्राहकहरु छन्, जस मध्ये धेरैले कम्पनी वेबसाइटमा लिखित र भिडियो समीक्षा छोडेका छन्।
तपाईंको साइटको अनलाइन दृश्यता मूल्यांकन गर्नुहोस्
प्रतिस्पर्धी वेबसाइटहरूको अन्वेषण गर्नुहोस्
अन-पृष्ठ अनुकूलन त्रुटिहरू पहिचान गर्नुहोस्
Semalt मा टोलीले अंग्रेजी, फ्रान्सेली, इटालियन, टर्की, र अन्य धेरै सहित धेरै भाषाहरू बोल्छ, त्यसैले भाषा तपाईं र तपाईंको व्यापार बृद्धि बीचमा एक बाधा हो भनेर चिन्ता नलिनुहोस्। टोलीका सदस्यहरू तपाईको क्षेत्रका विशेषज्ञहरू हुन् र तपाईको जिज्ञासा लिन तयार छन्।
२०१ 2014 मा, Semalt टीम नयाँ कार्यालयमा सरे। जब तिनीहरू आइपुगे, तिनीहरू एउटा फूलको भाँडामा कछुवा भेट्टाए। अनुसन्धान गरिसकेपछि, तिनीहरूले थाहा पाए कि अघिल्लो कार्यालयको मालिकले उसको स्वामित्व लिएको छ तर अब उहाँ चाहनुहुन्न। टोली अन्य सदस्य पाउँदा मात्र खुसी थियो। तिनीहरूले कछुवा राखे र उसलाई टर्बो भने। तिनीहरूले कछुवाहरूका लागि उत्तम खाद्य पदार्थहरू र उनीहरूको हेरचाह गर्ने तरिकाको बारेमा सिक्नमा समय खर्च गरे र चाँडै उसलाई नयाँ विशाल मछलीघर खरीद गरे। अब, उनी Semalt अफिसमा खुशीसँग बस्छन् र कम्पनी मस्कटको पदोन्नति भएको छ।
वेबसाइट एनालिटिक्सको साथ ग्रिप्समा पुग्दा वास्तवमै तपाईंको व्यवसायको फलफूल, समुद्री तट वा असफल हुँदै पनि भिन्नता बनाउन सक्छ। तपाइँका आगन्तुकहरू र उनीहरूले के खोजिरहेका छन् भनेर जान्न तपाइँको अनलाइन उपस्थितिलाई अनुकूलन गर्न र तपाइँको उत्पादनलाई प्रभावी रूपमा मार्केटि। गर्न महत्वपूर्ण छ। एक सम्मानित उपकरणको छनौट जस्तै Semalt वेब एनालिटिक्सले तपाईंलाई तपाईंको सामग्री र बिक्री सफलता ट्र्याक गर्न अनुमति दिनेछ, तपाईंको आगन्तुकको डेमोग्राफिक जान्नुहोस् र, महत्त्वपूर्ण कुरा, बिक्री रूपान्तरण दरमा तपाईंको भ्रमणहरू सुधार गर्नुहोस्।